Dowlada Maraykanka oo soo dhoweeysay Doorashada Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya - iftineducation.com
Dowlada Maraykanka oo soo dhoweeysay Doorashada Madaxweynaha cusub ee Soomaaliya
aadan21 / February 9, 2017
iftineducation.com – Dowlada Mareykanka ayaa soo dhoweysay una hambalyeysay cusub ee Soomaaliya Mohamed Abdullahi Mohamed (Farmaajo) oo xalay ay baarlamaanka Soomaaliya ugu doorteen gudaha magaalada Muqdisho.
War Saxaafadeed kasoo baxay waaxda arrimaha dibada Mareykanka ayaa lagu sheegay in Mareykanka uu si dhow ula shaqeyn doonaan madaxweynaha cusub ee Dowlada Federaalka Soomaaliya.
Dowlada Mareykanka ayaa ku dhiirigelisay hogaanka cusub ee Soomaaliya inuu tallaabo la aamini karo uu u qaado sidii uu uga taqalusi lahaa musuq-maasuqa iyo sidii uu u sameyn lahaa hey’ado xoog leh oo kasoo shaqeeya doorashooyinka soo socda, si loo suurageliyo in Soomaaliya ay ka dhacdo doorasho hal qof iyo hal cod ah sanadka 2020-ka.
Bayaanka Waaxda Arrimaha Dibada ee Mareykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Mareykanka uu Madaxweynaha iyo dowladda cusub ee Soomaaliya kala shaqeyn doono sare-uqaadida dib u heshiisiinta, howlaha gurmadka abaaraha, amaanka iyo dhisida hey,ado xoog leh oo fuliya dowlad wanaag iyo horumarinta umadda Soomaaliyeed.
Dowlada Maraykanka ayaa dhowaan ku dartay dalka Soomaaliya liiska wadamo ay ka mamnuucday dalkeeda inay soo galaan dalka Maraykanka.
Sidoo kale dowlado badan ayaa soo dhoweeyay doorashada ka dhacday shalay dalka Soomaaliya isla markaana waxa ay u hambalyeeyeen madaxweynaha cusub ee Soomaaliya.
Madaxweynaha Jubbaland oo hambalyo u direy madaxweynaha cusub
AKHRISO: 5 arrin oo hortaala Madaxweyne Farmaajo